Archive du 20190710
Fiainam-pirenena, fifidianana.. Hanao Kongresy lehibe ny TIM
Hanatanteraka Kongresy lehibe eny amin’ny Magro Tanjombato ny Antoko Tiako I Madagasikara (TIM) tarihin’i Marc Ravalomanana ny zoma 12 sy ny sabotsy 13 jolay izao.
Fiarahamonim-pirenena Mba misy mihaino ihany ve ?
Marobe ny fitakiana fahamarinana mikasika ny fifidianana teto Madagasikara efa nalefa teny anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na HCC ary tsy vao izao fa saika isak’izay
Fanoherana ny hosoka sy halabato Manomana fihaonambe ny “Collectifs des candidats”
Mitohy ny tolona hiadiana amin’ny halabato sy ny hosoka izay ataon’ireo “collectifs des candidats”. Taorian’ny fihaonambe teny amin’ny “Live Hôtel”,
Depiote vao voafidy Samy miketrika mafy…
Na dia ny talata 16 jolay izao ny fivoriana manokana ireo solombavambahoaka vao voafidy amin` ny handinihin` izy ireo ny ho mpikamban` ny birao maharitra ao amin` ny lapan` Tsimbazaza dia fantatra fa samy mikaondoha avokoa ireo depiote isanisany.
Fifidianana ben’ny tanàna Mody adala, tsy taitra ny mpanao politika…
Afaka 10 andro dia hisokatra ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo hilatsaka hofidiana ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna, ka ny 03 aogositra no hiafarany.
Kaominin’Ankaraobato Mbola kandida Ben’ny tanàna i Randriamiarisoa Gilbert
Mbola hilatsaka hofidiana ho Ben’ny tanànan’Ankaraobato Randriamiarisoa Gilbert amin’ny fifidianana hotanterahina ny volana oktobra ho avy izao.
Fitandroana fihetseham-po mijery Barea « Ilaina ny sakafo maivana, fadiana ny rongony ! »
Zava-misy maneran-tany ny hoe mihetsipo rehefa ny ekipam-pirenen’ny tena no mandray anjara amina fifaninanana goavana toy ny amboaran’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra, hoy ny dokotera Domoina Soakanto Rakotonoely.
Lalaon’ny Barea sy Tonizia Hosorohana ny delestazy eto Iarivo, hoy ny Jirama
Hampitomboina ny tanjaky ny herinaratra vokarin’ny Jirama eto Antananarivo ho an’ny rahampitso alakmisy 11 jolay hisian’ny lalao baolina kitra goavana hifanandrinan’i Tonizia sy ny Barean’i Madagasikara eo amin’ny dingana ampahefa-dalan’ny CAN 2019.
eTech 10 taona Hikarakara « Jeux Corporatifs » eLalao
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-10 taonany teo amin’ny sehatry ny fikarakarana ny antsoina hoe « Transformation Digitale », taty amin’ny Faritry ny Ranomasimbe Indianina sy teto Madagasikara
Hijery Barea sy Tonizia amin’ny alakamisy Anio amin’ny 12 ora atoandro ny fara-fisoratana anarana
Ny alakamisy 11 jolay ho avy izao no lalao ampahefa-dalana hifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Tonizia, lalao izay atao any Cairo ao Caire Ejipta. Efa tonga teto an-tanindrazana afak’omaly ireo mpanohana ny ekipa Malagasy.
Basket Asief Analamanga Hiditra amin’ny andro faha-5
Hiditra amin’ny andro faha-5 sahady ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny taranja basikety karakarain’ny ASIEF « Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaire » amin’ity faran’ny herinandro hitsahana ity.
Afghanistan Hiala ny tafika Amerikanina
Hanatanteraka fivoriana goavana any Doha any Qatar ireo mpiantsehatra politika afghanina sy amerikanina maro,
Collier Alefa Barea, Bapampa, Fehin-tanana Mahalany roa baoritra isan’andro ny mpivarotra iray
Taorian’ny fandresena miezinezina azon’ny ekipam-pirenena Barean’i Madagasikara ny alahady lasa teo, ankoatra ny mpivarotra ny polon’ny Barea,